Shiinaha Customized boorsada boorsada keensashada, alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada isboortiga > Boorsada buur-buur
(1) Waxaan sameyn doonnaa wax kasta oo macquul ah si aan kuu badbaadinno kharashyada. (2) Waannu xiriir la yeelan doonnaa 24 saacadood. Waxaan u adeegsan doonnaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka oo habsami leh. (3) Ka dib markii muunadda la iibiyo, haddii nuqulka ugu horreeya loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddeleynaa muunadda iyadoo la raacayo faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamka oo dhan ee soo saarista muunadda labaad waa gebi ahaanba bilaash. (4) Sanduuqayaga shirkadda ayaa si joogto ah u shaqeynaya oo ay ka shaqeeyaan shaqaale xirfadlayaal u ah adeegga macaamiisha. Waad noo soo qori kartaa talo iyo cabasho wakhti kasta. Waxaan u aqrin doonnaa una soo jawaabi doonnaa si hufan oo taxaddar leh. (5) Waxaan si adag u xakamayn doonnaa tayada badeecadaha oo waxaan kuu soo gudbin doonnaa adiga oo ku qaadanaya heerka 100%.
Boorsada baaskiilka buuraha
1. Sidee loo doortaa boorsada baaskiilka buuraha?
Doorashada boorsada saxda ah ee baaskiilku waxay inta badan kuxirantahay boorsada aad qorsheyneyso inaad iibsato
(1) Boorsada baaskiilka buurahas need to have ergonomic characteristics, which will help improve the comfort and stability of the backpack. The body positioning of a person when riding a bicycle is very different from that of walking, hiking, running, etc.
(2) Safarka: Haddii aad qorsheyneyso inaad u isticmaasho boorsadaada baaskiilka safarka dugsiga ama xafiiska, fadlan hubi inaad mid u diyaariso tan. Boorsooyinka wax lagu raaco ayaa badiyaa leh qaybo jilicsan oo laptops iyo kiniiniyada ah. Waxay sidoo kale u muuqdaan inay miisaskooda dhigaan qalimaan, waraaqo iyo abaabulayaal kale oo kaladuwan. Hubso in boorsada iskuulku si raaxo leh u fuuli karto marka buugaagta la raro. Nidaamka suumanka ee boorsada rakaabka badanaa wuu fiican yahay, laakiin si fiican uma shaqeynayo. Haddii dhulkaaga fuulitaankiisu yahay mid qallafsan oo aan sinnayn oo u baahan jimicsi fara badan, fadlan isticmaal boorsada baaskiil buur.
(3) Baaskiil wadista buuraha: Marka loo barbardhigo boorsooyinka baaskiilka caadiga ah, boorsooyinka baaskiillada buuraha ayaa leh faa'iido weyn. Waxay ku leeyihiin qaar ka mid ah nidaamyada suunka ugu fiican suuqa. Markuu ka baxayo wadada, fuushanuhu waa inuu ku wareegaa si uu u ilaaliyo dheelitirka iyo culeyska culeyska booska saxda ah. Dhaqdhaqaaqa socodsiiyaha wuxuu u oggolaanayaa naqshadeeyayaasha boorsada inay abuuraan nidaamyo sugi kara boorsada meel kasta. Sidaa darteed, boorsada baaskiil tayo sare leh ayaa isku duubi kara jirka qofka xiran, waxayna leedahay suun la isku hagaajin karo, oo leh xabadka, garbaha iyo suumanka dhexda.
(4) Baaskiil wadid ama baaskiil: Haddii aad tahay qof baaskiil wadata (xirfadle ama xamaasad leh), waxaad u baahan kartaa huuriye khafiifa ama xitaa jaakad Ma qaadi doontid waxyaabo aad u tiro badan, sidaa darteed marin fudud (tusaale ahaan, garabka garabka biyaha ama khad fuuq) ayaa ugu muhiimsan.
2. Boorsada baaskiilka buuraha product parameters (specifications)
Dhererka 26cm X ballaca 23cm X dherer 46cm
3.Waxaad ubaahantahay boorsada baaskiilka
Waa la dhihi karaa waxa ugu muhiimsan ee laga fiirsado marka la dooranayo boorsada baaskiilka waa cabir.
Waxaad ubaahantahay inaad istareexdid markaad baaskiil wado. Haddii boorsadaadu ay aad u weyn tahay, waxay sababi kartaa in taayirada dambe ay salaaxaan ama kuu horseedaan inaad ku dhacdo muuqaal aan fiicnayn. Xaqiiqdii waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso inta cabbir ee aad u baahan tahay si aad ugu haboonaato qalabkaaga si raaxo leh.
Haddii aad ku nooshahay Mareykanka, waxaad ogaan doontaa in xirmooyin badankood lagu calaamadeeyay litir. Looma baahna in la mashquuliyo si loogu beddelo cagaha cubic ama wax aad u taqaanid, waxaad u adeegsan kartaa liistada hoose sida hage dhaqso ah
· 10L illaa 15L = baakad yar oo is haysta
· 16L illaa 20L = xirmo dhexdhexaad ah
· 20L ilaa 30L = weyn
· 30 litir + = aad buu ugu weynaan karaa safarka epic
Marna ma ahan fikrad fiican in la helo shandad leh meel bannaan oo dheeri ah â € œSida saxda ahâ €. Kuwa raba inay helaan boos dheeri ah, xalka ayaa ah inay helaan boorso la balaarin karo.
Booska dheeraadka ah waxaa badanaa laga helaa jiinyeer, kaas oo sii daaya walxo xad dhaaf ah markii la furo, taas oo ka dhigaysa qaybta weyn mid weyn. Marka faashadda la xoqo, weli waxaa jira boorsooyin qaarkood oo la sii furi karo. Ikhtiyaar kasta waa ikhtiyaar wanaagsan, markaa dooro midka aad u maleyneyso inuu ka fiicnaan doono. Waxay awood kuu siin doonaan inaad haysato boorso ku habboon, waxaadna inta badan ogaan doontaa in jiinyeerka ballaarinta uu xiran yahay.
Kordhinta ugu dambeysa ee waxtarka leh waa bacda sare ee laaban karo. Waqtiyada yar ee korka laga rogo, ayaa sii kordhaya booska baakadaha.
Dhammaan dadka yar-yar ee halkaas jooga, iska hubi inaadan dooran boorso aad u yar. Waxaa jira sabab aad u doorato boorso. Hubso in boorsadu ay ballaaran tahay oo ku habboon taleefankaaga ama qalabkaaga, ama waxyaabaha kale ee aad rabto inaad qaadatid waxay go'aaminayaan inaad hesho boorso baaskiil.
4. Sidee loo doortaa shaqada boorsada baaskiilka buuraha?
Jeebka laptop-ka. Sida kor ku xusan, laptop-yada iyo kiniiniyada waxaa sida caadiga ah qaada rakaab. Baakado badan ayaa la yimaada jeebado la huwiyay si loo ilaaliyo maalgashigaaga korantada. Qeybta caadiga ah ee laptop-ka waxay qaadi kartaa laptops 15-inch ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u ekaato mid kugu filan, waxaad ogaan doontaa in boorsada jeebabka qaaska ah ku jirtaa ay qaadi karto ilaa 17 inji oo laptop ah.
Daboolka roobka. Daboolka roobka ayaa ka ilaaliya biyaha inay ka soo baxaan shandadaada dhabta ah waxayna alaabta ku keydisaa ka ilaaliyaa biyaha. Waxyaabaha kale ee xiisaha u leh daboolida roobka ayaa ah inay sidoo kale leeyihiin faahfaahin ka tarjumeysa si ay kuu sii noolaato. (Waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa boorsooyinka aan biyuhu karin iyo kuwa aan biyuhu xirin)
Muraayadaha jeebka. Boorsooyin badan ayaa leh jeeb ku habboon keydinta muraayadaha ama muraayadaha indhaha. Jeebyadan waxaa lagu dhejiyay maro jilicsan si loo hubiyo in muraayadaha indhaha aan la xoqin.
Kaamirada iskutallaabta. Labada sawir qaadayaasha iyo sawir qaadayaasha waxay ka faa'iideysan doonaan qeybiyeyaasha iyo qaybo gaar ah si loo hubiyo amniga kamaradaha iyo muraayadaha indhaha. Kuwani waxaa badanaa laga helaa boorsooyinka dhabarka ee loogu talagalay kamaradaha.
Furka Mararka qaarkood waxaad heli doontaa boorso leh dhalo furfuran. Tani waa wax ka cusub wax walba, laakiin haddii aad jeceshahay inaad cabto cabitaan ka dib raacitaankaaga, taasi waa wax weyn.
Xidhmada qoyaanka. Boorsooyinka booska leh ee loogu talagalay nidaamka fuuq-celinta waxay ku habboon yihiin kuwa ku hawlan ciyaarta daran ama kuwa aan doonayn inay weel la qaataan. Qaar ka mid ah shandadaha dhab ahaantii waxay leeyihiin nidaam biyo-celin ah, halka kuwa kalena ay leeyihiin hal qol oo keliya. Sidaa darteed, hubi inaad hubiso ka hor intaadan iibsan. Kaadiheysta fuuq-baxa sidoo kale waxay ku timid cabbirro badan oo kala duwan, markaa fadlan go'aamiso inta biyo aad u malaynayso inaad u baahan tahay inaad ku iibsato biyaha kuugu fiican.
Faahfaahinta milicsiga iyo qalabka fudud ee baaskiilka. Haddii aad fuushan tahay ka hor intaan qorraxdu soo bixin, qorrax dhaca ka dib, ama cimilada oo xun, waa muhiim inaad tixgeliso faahfaahinta milicsiga iyo lifaaqyada iftiinka baaskiilka. Iftiinka tooska ah, faahfaahinta milicsiga ayaa ka ifaya gudcurka. Sidaa darteed, haddii gaari kuu soo dhowaado habeenkii, nalka hore ee iftiinka ayaa ka ifaya iftiinka qaybaha si loo hubiyo in darawalka gaariga uu ku arki karo. Qalabka nalalka baaskiilka ayaa kuu oggolaanaya inaad tusto tiradaada kuwa kale adoo isticmaalaya nalka lagu hayo boorsada. Si ka duwan faahfaahinta milicsiga, tani uma baahna iftiin.
6. Xirxirida iyo gaarsiinta boorsooyinka baaskiilka buuraha
(2) Cabbirka baakadka ee caadiga ah: dherer 26cm X ballac 23cm X dherer 46cm ah, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 28cm X 45cm X 48cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
Calaamadaha kulul: Boorsada bukeetiga buurta, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka